जिउँदो छँदा वर्षौ कुर्दा पूरा नभएको श्रीदेवीको एउटा सपना मरेको ४८औ दिनमा यसरी पूरा भयो | Rajmarga
जिउँदो छँदा वर्षौ कुर्दा पूरा नभएको श्रीदेवीको एउटा सपना मरेको ४८औ दिनमा यसरी पूरा भयो
चर्चित भारतीय अभिनेत्री स्वर्गीय श्रीदेवीको एउटा सपना मृत्यु भएपछि पूरा भएको छ। श्रीदेवीको चलचित्र ‘मम’का लागि सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्रीको पुरस्कार पाएपछि उनको त्यो सपना पूरा भएको हो । यो सपना उनले वर्षौदेखि देख्दै आएकी थिइन् । तर उनको त्यो वर्षौ पूरानो सपना उनको मृत्युपछि मात्र पूरा भएको छ।
श्रीदेवीले आफ्नो करिब ५० वर्षे करिअरमा बाल कलाकारदेखि बच्चाको ‘मम’ अर्थात आमासम्मको विभिन्न भूमिकाहरुमा शानदार चलचित्रहरु दिइन् । तर उनलाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री पुरस्कार उनको ३००औं र अन्तिम चलचित्र ‘मम’ का लागि प्राप्त भयो ।
जबकि उनको फिल्मी जीवनमा कयौ यस्ता अवसर आए जब श्रीदेवीसहित धेरैलाई लाग्यो कि श्रीदेवीलाई यसपटक राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त हुनेछ । तर त्यस्तो भएन र जब पुरस्कारको घोषणा भयो तब त्यो पुरस्कार श्रीदेवीको ठाउँमा अरु नै अभिनेत्रीको झोलामा गयो ।
तर अब श्रीदेवी यो संसारमा छैनन् तब उनको निधन भएको ४८औं दिनपछि उनलाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्रीसम्बन्धी राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त हुँदा श्रीदेवीको आत्माका साथै उनका परिवारजनलाई पनि सन्तुष्टि मिल्नेछ कि अन्ततः उनलाई त्यो सम्मान प्राप्त भएरै छाड्यो जुन उनलाई वर्षौ पहिला प्राप्त हुनु पर्ने थियो । यद्यपि यो पहिलो अवसर हुनेछ जब कुनै अभिनेत्रीलाई मरणोपरान्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त भएको छ।
राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार पाउने चाहने हरेक कलाकारलाई हुने गर्दछ, भलै यसबाट उनीहरुको जीवनका खासैपरिवर्तन आओस् वा नआओस् । यो पुरस्कार राम्रो अभिनयका लागि सरकारी मान्यता दिएर उक्त कलाकारलाई विशिष्ट पहिचान प्रदान गर्दछ ।
श्रीदेवीसँग सन् १९९१ मा मैले राष्ट्रिय पुरस्कारका विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ, उनी त्यतिबेला जयपुरमा एउटा चलचित्रको सुटिङ गरिरहेकी थिइन् । मैले उनलाई सोधेको थिएँ कि तपाईलाई यतिधेरै लोकप्रियता र सफलता प्राप्त भइसकेको छ, तर तपाईले अहिलेसम्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीसम्बन्धी राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त भएन, के यो कुराप्रति तपाईमा अफशोस रहन्छ ? यस विषयमा श्रीदेवीले जवाफ दिएकी थिइन्–म पनि चाहन्छु मलाई राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त होस । यो त हरेक कलाकारको सपना हुन्छ । मेरो पनि यही सपना छ।अहिलेसम्म प्राप्त भएन, यसमा दुःख त लाग्छ । तर के भन्न सकिन्छ, मानिसको सबै इन्छा पूरा पनि त हुँदैन ।
श्रीदेवीले सन् १९६७ मा दक्षिण भारतीय चलचित्रमा बाल कलाकारको रुपमा आफ्नो करिअर सुरु गरेकी थिइन् । तर जब १९७८ मा नायिकाका रुपमा चलचित्र ‘सोलहवाँ सावन’ मा उनी हिन्दी चलचित्रमा आइन् तब उनलाई सफलता प्राप्त भएन । तर जब १९८३ मा उनको चलचित्र ‘सदमा’ र ‘हिम्मतवाला’ आयोतब उनी हेर्दाहेर्दै हिन्दी चलचित्रको स्टार बनिन् ।
‘हिम्मतवाला’ ले जहाँ व्यवसायिक रुपले जबरजस्त सफलता पायो, त्यही ‘सदमा’ले देखाइदियो कि उनी एक शानदानर अभिनेत्री हुन् ।
म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र समारोहमा यही सोचेर ‘सदमा’ हेर्न गएको थिएँ कि यसमा कमल हसनजस्ता अभिनेता छन् । तर जब म चलचित्र हेरेर बाहिर निस्किएँ तब श्रीदेवीको अभिनय मसँगै आयो । तब लागेको थियो कि श्रीदेवीलाई यसपटक राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त हुनेछ ।
तर १९८७ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको राष्ट्रिय पुरस्कार त्यो वर्ष श्रीदेवीलाई नभएर चलचित्र ‘खण्डहर’का लागि शबाना आजमीलाई प्राप्त भयो ।
यस्तै सन् १९८७ मा जब श्रीदेवीको चलचित्र ‘मिस्टर इन्डिया’ आयो तब पनि लागेको थियो कि यो वर्ष राष्ट्रिय पुरस्कार ‘हवा हवाई गर्ल’ ले पाउने छिन् ।तर त्यो वर्ष पनि यो पुरस्कार श्रीदेवीलाई नदिएर तमिल चलचित्र ‘विडू’का लागि अभिनेत्री अर्चनाको झोलामा गयो । तर जब १९८९ मा श्रीदेवीको एउटा होइन दुई वटा शानदार चलचित्र आयो ‘चाँदनी’ र ‘चालबाज’ तब एकप्रकारको लहर थियो कि यो वर्ष निश्चय पनि राष्ट्रिय अभिनेत्रीको पुरस्कार श्रीदेवीले पाउने छिन् । तर यो वर्ष पनि सबैको धारणा गलत सावित भयो र त्यो वर्ष यो राष्ट्रिय पुरस्कार बंगला अभिनेत्री श्रीलेखा मुखर्जीको नाममा गयो ।
यस्तो अर्को अवसर त्यतिबेला आयो जब १९९१ मा श्रीदेवीको एउटा अर्को अविस्मरणीय चलचित्र ‘लम्हे’ प्रदर्शन भयो । तर त्यतिबेला पनि श्रीदेवीले राष्ट्रिय अभिनेत्रीको पुरस्कार पाउन सकिनन्, त्यो वर्ष असमिया अभिनेत्री मोलोया गोस्वामीले त्यो पुरस्कार पाइन् ।सन् १९९७ मा जब चलचित्र ‘जुदाई’ आयो तब लाग्यो कि श्रीदेवीको सपना पूरा हुनेछ । तर त्यो वर्ष पनि यो पुरस्कार बंगला चलचित्र ‘दहन’का लागि संयुक्त रुपमा दुई अभिनेत्री इन्द्राणी हलधर र ऋतुपार्णो सेनगुप्तले पाए ।
यसक्रममा श्रीदेवीलाई ‘चालबाज’ र ‘लम्हे’का लागि बेस्ट एक्ट्रेसको फिल्मफेयर अवार्ड त पाइन् । दक्षिणको चलचित्रका लागि पनि उनलाई फिल्म फेयरसहित केही अरु अवार्डस् पनि प्राप्त भइरह्यो । सन् २०१३ मा सरकारले श्रीदेवीलाई पद्यश्री पनि दियो । तर त्यतिबेला पनि उनलाई राष्ट्रिय पुरस्कार नपाउनुलाई धेरैले अचम्म माने ।
श्रीदेवीका श्रीमान बोनी कपुरसँग हामीले कुरा गर्दा उनले यो पुरस्कारप्रति खुसी व्यक्त गर्दै भने–श्रीदेवीलाई यसअघि १९७० मा बाल कलाकारका रुपमा चलचित्र ‘कोमबाटा’ का लागि केरल सरकारले स्टेट अवार्ड त दियो तर राष्ट्रियपुरस्कार उनलाई पहिलोपटक प्राप्त भयो ।
जुन चलचित्र ‘मम’ का लागि श्रीदेवीलाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको पुरस्कार प्राप्त भयो, यसका मुख्य निर्माता बोनी कपुर नै हुन् । यो चलचित्र ७ जुलाई २०१७ मा हिन्दीसहित तमिल, तेलूगू र मलयालम अर्थात जम्मा चार भाषामा प्रदर्शन भएको थियो । यो चलचित्रमा श्रीदेवीले एउटी यस्तो विद्यालय शिक्षिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्, जो आफ्नो सौतेनी छोरी बलात्कार भएकोमा न्यायका लागि लामो लडाई लड्छिन् । चलचित्रमा श्रीदेवीको सशक्त अभिनय हेर्न सकिन्छ ।
यो नियतिको खेल हो वा संयोग कि जिउँदै छँदा श्रीदेवीजस्तो सशक्त अभिनेत्री कुनै राष्ट्रिय पुरस्कार पाउने सपना देखिरहिन् । तर परणोपरान्त उनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै सम्मान प्राप्त भयो । गत २४ फेब्रुअरीमा मुम्बईमा भएको श्रीदेवीको निधनपछि जब २८ फेब्रुअरीमा मुम्बईको विले पार्लेमा उनको अन्तिम संस्कार गरियो तब उनको शवमा राष्ट्रिय झण्डा लपेटेर सम्मान गरियो । उनी पहिलो भारतीय अभिनेत्री थिइन् जसले यो सम्मान प्राप्त गरिन् ।
साथै पछिल्लो दिन ओस्कार फिल्म समारोहमा पहिलोपटक भारतीय फिल्म अभिनेत्रीलाई श्रद्धाञ्जली दिएर श्रीदेवीप्रति ठुलो सम्मान दिइयो । अब उनलाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त हुनु उनको सम्मानको अर्को कडी हो । प्रदीप सरदाना, बरिष्ठ पत्रकार एवं फिल्म समीक्षक
Previous post: अपांगता भएकाले पढ्न नपाउने ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै भर्ना गराउन सकेनन् !
Next post: तपाईलाई थाहा छ, स्वास्थ्यका लागि व्यायमको महत्व? व्यायममा सोच यसरी महत्वपूर्ण हुन्छ ?